16 jir u geeriyoodey jir dil loo geystey - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
16 jir u geeriyoodey jir dil loo geystey
La daabacay onsdag 10 oktober 2007 kl 15.25
Habeenimadii Jimcada ee Sabtidu soo galeysey, ayaa xaflad ka dhaceysey hool ku yaala xaafadda Kungsholmen ee magaalada Istockholm saacaddu kolkey aheyd abaarihii 01:00 habeenimo jirdil ba’an loogu geystey inan 16-jir ah,
kadib kolkey is qabteen koox dhallinyaro ah ee xafladdaasi ka qeyb qaadaneysey. Goobtaasi ayey Poliisku gacanta ku dhigeen dhallainyaro dhowr ah ee lagu tuhunsanaa iney jir dilkaa ka qeyb qaateen. Iyadoona kadib go’aan lagu gaarey in afar ka mid ah xabsiga lagu sii hayo halka midkoodna oodda laga qaadey. Dacwaddii lagu heystey ayaa sidoo kale la sheegey in sare loo qaadey lana gaarsiyey dil kaw ah. Iyadoona middaasi ugu wacneyd kolkuu dhaawacyadii loo geystey ee madaxa u geeriyoodey inankaa 16- jirka ah.
Amuurtaa ayaa laga bixiyey Jawaabo iyo doodo wata fikirro kala duwan, kuwaasina oo ku saleysnaa dhibaatooyinka ey kooxaha dhallinyarada ahi isku geystaan habeennada Sabtida iyo Aaxadaha inta ey fasaxa yihiin, xilliyaddaa oo ey magaalada ku yar yihiin dad ka waaweyn ee u caqli celiya, iyo sidoo kale dhallinyaro u guntadey iney u istaagaan sidey u joojin lahaayeen dhibaatooyinkaa.
Maalinta Jimcada ee foodda innagu soo heysa, waa 12-ka Oktoober ayaa barxadda Sergels Torg ee magaalada Istockholm lagu qaban doonaa bannaanbax halheys looga dhigey: ”Naga ilaaliya rabshadaha iyo dilka aan macnaha ku fadhiyin ee waddooyinkeena ka dhaca”.
Bannaanbaxaasina oo uu qaban qaabadiisa wax ka lahaa inanka la yiraahdo Anton Abele:
- Waxaan ka bannaanbixi doonaa dilka ka dhaca waddooyinka habeen walba ee jimca, sabti ama axad ah.
Halkaasoona aan daqiiqad u aamusi doono inanka dhowaantan la diley iyo intii horey loo diley ama waxyeelada loogu geysteyba.
Anton Abele, oo sidoo kale aaladda Internetka ka bilaabey habar wacasho dhibaatooyinkaa looga soo horjeedo, ayey maalmo gudahood iska diiwaangeliyeen dadyoow kumanyaal gaareya.
som också startat en kampanj på nätet mot gatuvåldet, en kampanj som fått ett enromt gensvar... flera tusen personer anslöt sig varje timme igår, och när dagen var slut var antalet medlemmar uppe i nästan 20.000.
Waxaa loo baahan yahey in wax laga bedelo fikirrada iyo dhaqanmka dhallaanka, sida uu sheegey Anton Abele iyo Alexis Appelgren Gougoulakis, oo isaguna ka mid ah dhallinta isku xilsaartey laheydna qabanqaabada bannaanbaxaasi.
- Maanta waxaa loo arkaa dilka iyo dagaalka waddooyinka iney
yihiin kuwo caadiya.
- Dilka iyo dhibaatada ayaa ka mid ah nolol-maalmeedka dhallaanka, sida ey sheegtey Lena Nyberg, madaxa heyadda u doodda xuquuqda dhallaanka ee Barnombudsmannen.
Baaritaan ey heyaddaasi sameysey ayey ku caddaatey saddex daloolow mid ey dhallaanka dhigta fasalka saddexaad ee dugsiga sare la kulmeen harraati iy jir dil.
Jirdilka ey dhallaanku isku sameeyaan ayaa badanaa ku dhacda koox ahaan ama raxan ahaan.
Inkasta oo aaney aheyn mid inta badan dhacda in dhibaatada ey dhallaanku isu geystaan sababto geeri.
Waa wax dhaca in aan badneyn. Sannadkii mid ama laba. Taasoona aan kordhin yaraanna, sida uu sheegey caalin Mikael Rying ku takhasusey dembiyada dhaca, ee ka howlgala heyadda ka hortagga dembiyada ee marka la soo gaabiyo loo yaqaan (Brå).
Diana Karatas och Ida Part-Rosander, ayaa qaba in loo baahan yahey waalidiintu iney masuuliyad ballaaran isa saaraan.
- Haddii aan xaflad meel ku qabsanno waxaan jeclaan lahaa iney waalidku ka dhow yihiin goobta xafladda.
- Waxaan qabaa in waalid badani aaney xilkooda ka soo bixin,
waayo dhallaan badan ee saaxiibadeya waxey aqalladooda tagaan
goortii ey doonaan.
Codadkii ugu dambeeyeyna waxey ahaa dhallaanka Diana Karatas iyo Ida Part-Rosander.
Wareeysiyadaana waxaa inoo soo diyaariyey
TV-Aktuellt iyo Ekot.